Soosaarayaasha mitirka smart - Shiinaha Bixiyeyaasha mitirka smart, Warshadaha
Saddex-weji afarta-silig / saddex-wajiga-saddex mitir tamarta mitirka waxay qaadataa wareeg ballaaran oo isku-dhafan waxayna adeegsataa guntinta cabbirka tamarta sareysa. Awoodda isgaarsiinta iyo ku tiirsanaanta moodeelka ayaa sidoo kale gaartay heer codsi wax ku ool ah oo ballaaran. Waxay aqbashaa tikniyoolajiyada sambalka samaynta dhijitaalka iyo habka SMT, waxaana loo qaabeeyey loona soo saaray iyadoo loo eegayo awoodda dhabta ah ee isticmaaleyaasha warshadaha.
Mitirka wajiga korantada korantada ayaa ah shey cusub oo lagu cabbiro tamarta oo ay soosaartay shirkadeena iyadoo la raacayo tilmaamaha farsamada ee GB / T17215.321-2008. Waxsoosaarkan ayaa adeegsanaya wareegyo isku-dhafan oo ballaaran iyo farsamooyin SMT, oo leh hawlo ay ka mid yihiin cabbiraadda tamarta korantada, xog-ururinta, kormeerka waqtiga-dhabta ah, iyo is-dhexgalka macluumaadka.
Saddex-wajiga-afar-silig / saddex-wajiga-saddex mitir tamarta mitirku waa wareeg balaaran oo isku-dhafan, oo la adeegsanayo tikniyoolajiyada samaynta dhijitaalka iyo nidaamka SMT, oo loo naqshadeeyay loona soo saaray iyadoo loo eegayo awoodda dhabta ah ee isticmaaleyaasha warshadaha. Waxay buuxisaa shuruudaha GB / T 17215.301-2007 ， DL / T 614-2007 iyo DL / T645-2007 .Haahidaas waxaa loo dejisan karaa iyadoo loo eegayo baahida shaqada.